नेपाल भ्रमण बर्ष – ‘घुम्न जाऔं पश्चिम दाङ’ कहिले देखि ? « Chhahara Online
नेपाल भ्रमण बर्ष – ‘घुम्न जाऔं पश्चिम दाङ’ कहिले देखि ?
सन् २०२० को सुरुवात संगै नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० सुरुवात गरिएको छ । बुधबार साँझ भब्य समारोहका विचमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले काठमाण्डौं स्थित दशरथ रंगशालाबाट औपाचारीक रुपमा नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० को शुभारम्भ गर्नुभयो । सो अवसरमा विभिन्न देशका मन्त्रीहरुको सहभागिता समेत रहेको थियो । सरकारले सन् २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । यस अभियानले ऐतिहासिक, पुरातात्वीक, प्राकृतिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटकिय स्थलको प्रचार प्रसार विश्व सम्म पुग्ने छ ।
विभिन्न प्रदेशहरुले पनि औपचारीक रुपमा नेपाल भ्रमण बर्षको उद्घाटन गरेका छन् । प्रदेश नं ५ ले बर्दियाबाट नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले औपचारीक रुपमा उद्घाटन गर्नुभयो ।
यता दाङ जिल्लामा पनि औपचारीक रुपमा नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० शुभारम्भ भएको छ । घोराही र तुलसीपु्र उपमहानगरपालिकाले भव्यताका साथ शुभारम्भ गरेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकाले धार्मिक स्थल बाह्रकुने दहबाट र तुलसीपुर तुलसीपु्र उपमहानगरपालिकाले पर्यटकिय स्थल राप्ती शान्ति उद्यान तुलसीपुरको गणेशपुर पार्कबाट शुभारम्भ गरेको छ । विभिन्न संघ संस्थाले साथमा साथ दिएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ‘घुम्न जाऔं तुलसीपुर’ नारा नै बनाएको छ । विभिन्न ठाउँ र सवारी साधनमा ‘घुम्न जाऔं तुलसीपुर’ पोष्टर टाँसिएको छ । आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक दाङका भित्र्याउन यस अभियानले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने छ ।
विभिन्न ठाउँमा भ्रमण वर्ष २०२० को निकै तामझमका साथमा शुभारम्भ भईरहदा पश्चिदाङमा भने यस्तो चहलपहल देखिएन । पश्चिमदाङ पनि ऐतिहासिक, पुरातत्वीक, प्राकृतिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटकिय स्थल थुप्रै छन् । केही चर्चामा आएका र प्रचार प्रसारको ओझेलमा रहेका थुपै्र पर्यटकिय स्थल छन् । यहाँका केही स्थानिय सरकारले माघ महिनाबाट भ्रमण बर्ष २०२० अभियानलाई सार्थकता दिने जनाइएका छन् ।
पश्चिदाङको बबई गाउँपालिका रमणिय प्राकृतिक पुरन्धरा छहरा छ, जसले पर्यटकलाई मनै लोभ्याउँछ । यो छहरा पछिल्लो समयमा आन्तरिक पर्यटकको रोजाईमा पर्न सफल भएको छ । घुमघाम मात्र होइन यहाँ पिकनिङको रुपमा पनि प्रसिद्ध हुदै गएको छ । यस्तै नजिकमा बबई नदि भएकाले गर्मी मौषममा पौडी खेल्न र छहरा अवलोकन गर्नेको भिड लाग्ने गर्दछ ।
बबई–६ चिसापानिमा शिव मन्दिर रहेको छ । धार्मिक दृष्टिकोणले यो निकै प्रसिद्ध मानिन्छ । शिवरात्रीका दिनमा मेला समेत लाग्ने गर्दछ । बबइ–७ मलईमा चमेरी गुफा रहेको छ । जो प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ । कसै पनि यसको प्रचार–प्रसार र संरक्षण नगर्दा यो ओझेलमा रहेको छ । बबई–७ कालितरमा रातापहर रहेको छ । हेर्दा निकै रमणिय र पृथक रहेको यो स्थल प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा छ ।
यस्तै शान्तिनगर–७ को धनौरा शिव मन्दिर धार्मिक दृष्टिकोणले यो निकै प्रसिद्ध मानिन्छ । शिवरात्रीका दिनमा मेला लाग्ने गर्दछ । यस्तै शान्तिनगर–१ मा पनि शिव मन्दिर रहेको छ । र शान्तिनगर गाउँपालिका मै अवस्थित रहेको पर्यटकिय स्थल पनि प्रचार–प्रसार र संरक्षणको पर्खाइमा छ ।
दंगिशरण गाउँपालिको चखौरामा थारु संग्राहलय रहेको छ । पछिल्लो समयमा यो संग्राहलय हेर्न आउनेको संख्या दिन प्रति दिन वढ्दो छ । थारु सस्कृति, थारु भेषभुषा, थारु रहनसहन दुरुस्तै हेर्न सकिने यस संग्रालयबाट थारु समुदायको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ । थारु संग्राहलय पर्यटकको रोजाईको केन्द्र बन्दै गएको छ ।
प्रचार प्रसार र संरक्षणको अभावमा धेरै पर्यटकिय स्थलहरु ओझेलमा पर्दै गएका छन । यी पर्यटकय स्थलको प्रचार प्रचार गर्नु हामी सवैको दायित्व हो । नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० ले ओझेलमा रहेका पर्यटकिय स्थलको खोज अनुसन्धान हुनेछ । अहिले स्थानिय तहमा सवै किसिमका अधिकार आएको छ । आफ्नो गाउँ ठाउँमा रहेको पर्यटकिय स्थलको खोज अनुसन्धान र संरक्षणमा स्थानिय सरकार लाग्नु पर्छ । स्थानिय सरकार लागू भएपछि खोज, अनुसन्धान र संरक्षण नभएको पनि होइन तर अझै पनि आझेलमा रहेका पर्यटकिय स्थलको खोजी गरिनु पर्छ । स्थानिय सरकारले नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० अभियानलाई सफल बनाउन तिव्ररुपमा स्थानिय पर्यटकिय स्थलहरुको प्रचार प्रसारमा जुट्न आवश्यक छ । आन्तरिक मात्र होइन वाह्य पर्यटक स्थानिय पर्यटकिय स्थमा भित्राउने प्रयासमा जुट्न आवश्यक देखिन्छ । अनि मात्र भ्रमण बर्ष २०२० सफल हुनेछ । पर्यटकिय स्थलको प्रचार प्रसार र स्थानिय स्तरमा उत्पादित बस्तु विक्रिविरण बढ्नेछ । यहाँ व्यापार व्यवसाय र रोजगारी समेत सिर्जना हुनेछ । साथै आयस्रोत बढ्दै जानेछ । त्यसैले स्थानीय सरकार मात्र होइन आजै देखि सवै व्यक्ति, संघ संस्था, राजनितिक दल, व्यापारी, बुद्धिजिवि भ्रमण बर्ष २०२० सफल पार्न जुटौँ ।